Wada Hadalada Somaliland Iyo Kooxda Khaatumo Oo Hargeysa Ka Furmay Iyo Masuuliyiinta Labada Dhinac Uga Qayb Galay | Cadceed newssite
Wada Hadalada Somaliland Iyo Kooxda Khaatumo Oo Hargeysa Ka Furmay Iyo Masuuliyiinta Labada Dhinac Uga Qayb Galay
June 17, 2017 Hargaysa (Cadceed) -Warar xog ogaal ah oo ay helayso shabakada wararka cadceednews kana helayso ilo wareedyo u dhuun daloola madaxtooyada Somaliland ayaa waxay sheegayaan in wajigii Afaraad ee wada hadaladii dawlada Somaliland iyo Kooxda Khaatumo uu ka furmay magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland.
Wada hadaladan ayaa saddexdii waji ee hore waxay ka dhaceen dalalka Jabuuti iyo Itoobiya iyada oo wajigan Afaraadna sida naloo sheegay ay masuuliyiinta labada dhinac ka socdaa isla garteen inuu ka furmo magaalada Hargeysa.
Waxaana shir albaabadu u xidhan yihiin uu Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa uu hadda uga socdaa guddiyadii labada dhinac u matalayey wada hadalada,waxaana magaalada Hargeysa maalmihii u danbeeyeyba ku sugnaa xubno ka socda Kooxda Khaatumo oo uu hogaaminayo gudoomiyaha Baarlamaanka Kooxda Khaatumo isaga oo sidoo kalena uu Hargeysa ku sugan yahay horjoogaha Kooxdaasi Khaatumo Cali Khaliif Galaydh.
Waxaana labada guddi ee hadda shirku uga socda Ambassador Hotel Hargeysa kala hogaaminaya dhanka dawlada Somaliland waxa hogaaminaya Dr sacad Cali Shire wasiirka arrimaha dibada Somaliland halka dhanka kooxda Khaatumona uu hogaaminayo Prof Cali Khaliif Galaydh oo ah horjoogaha Kooxdaasi.
Wajiga Afaraad ee wada hadalada dawlada Somaliland iyo Kooxda Khaatumo ee naloo sheegay inuu ka furmay magaalada Hargeysa ayaa lagu wadaa inuu soo gabagaboobmo inta ka horeysa Ciidal Fidriga,waxaana la filayaa in wada hadalkan ay kasoo baxaan qodobo ka duwan kuwii hore uga soo baxay saddexdii Waji ee hore.
Gabagabadiina bulshada Somaliland ayaa iyagu aad ugu dhag taagaya natiijada kasoo baxda wajiga Afraad ee wada hadalka dawlada Somaliland iyo Kooxda Khaatumo uga furmay Hargeysa oo ah mid ka duwan kuwii hore islamarkaana sida xoguhu sheegeen laysla qaatay in lagu qabto Hargeysa.